၆။ မတူ၍တူသော | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ၆။ မတူ၍တူသော	10
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Jul 21, 2015 in Creative Writing, My Dear Diary | 10 comments
” ခြေတစ်လှမ်း အကွာက သူတို့နေရာ “(အပိုင်း ၆)
ကျနော်က နေ့ဘက်ကျယ်ခေါင်မှာအလုပ်လုပ်ပြီး ညဘက်မှာ ရွှေလီထဲသွားအိပ်ပါတယ်။
ကျနော်အိပ်တဲ့အခန်းက နေ လှမ်းကြည့်လိုက်ရင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုကိုမြင်နေရပါတယ်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်တွေကျနော်ရောက်တုန်းက ဒီနေရာကခြုံနွယ်ပိတ်ပေါင်းတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ မြေကွက်လပ်ကြီးပါ။
နောက်တစ်ခေါက်ထပ်လာတော့ အဲဒီဝိုင်းထဲမှာ ဖြစ်သလိုဆောက်ထားတဲ့
ရေသုံးတော့ လမ်းဘေး ရေတိုင်ငုတ်ကနေပိုက်ဆွဲပြီးသုံး။
အိမ်ရှေ့ထွက်ပြီးထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်နေတော့ မီးခိုးလေးတွေက တအူအူ။
အဲတော့မှ သူတို့နိုင်ငံမှာလဲ နေစရာမရှိတဲ့” ကျူး”တွေရှိပါလားလို့သိခဲ့ရပါတယ်။
(အဲဒီမှာ အရင်နေခဲ့တဲ့ကျူးတွေကို ဖယ်ခိုင်းပြီးဈေးဆောက်တာလို့သိရပါတယ်။
မရှိလို့ လာနေ ၊
ပိုင်ရှင်က ဖယ်ပေးဆိုတော့လဲ အသာတကြည်ဖယ်ပေး။
ဆန္ဒပြတယ် ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်တော့မကြားလိုက်ရပါဘူး၊)
မနက်စောစော နှင်းမကွဲခင် အလုပ်စလုပ်နေကြပါပြီ။
မဆလာဖျော်သူဖျော်နဲ့ အလုပ်တွေလုပ်နေကြတာ ချမ်းရအေးရကောင်းမှန်းမသိသလိုပါဘဲ။
သူတို့အလုပ်လုပ်ကြတာ အေးအေးဆေးဆေး သက်တောင့်သက်သာပါဘဲ။
အလုပ်လုပ်နေရင်းတန်းလန်း ဆေးလိပ်သောက်တာ ကွမ်းစားတာလဲမရှိ။
ထိုင်နားနေတာလဲမရှိ သူတို့အလုပ်ကို သူတို့ ပုံမှန်လုပ်သွားကြပါတယ်။
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့နေရာမှာ အမျိုးသမီးတွေလဲ ပါ ပါတယ်။
အုတ်စခင်းကတည်းက ချန်ထားခဲ့တဲ့နေရာလေးမှာ သစ်ပင်တွေလိုက်စိုက်ပြန်ပါတယ်။
ဒီဘက်မှာက အမျုိးသမီးတွေက အမျုိးသားတွေနဲ့ တန်းတူအလုပ်လုပ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။
ကျယ်ခေါင်ထဲမှာ မရှိမဖြစ် က အငှားယာဉ်လေးတွေနဲ့ လူစီးဆိုက်တွဲလေးတွေပါ။
အဲလိုအငှားယာဉ်တွေက ရွှေလီနဲ့ကျယ်ခေါင်သွားတဲ့ ကားတွေပါ။
သူတို့တွေက အလှည့်နဲ့ထွက်တော့ ကားတစ်စီးထွက်သွားလို့ နေရာရွှေ့ရင်
ကားကိုစက်မနှူိးဘဲ တွန်းရွှေ့ကြတာကိုမြင်ရတော့ အတော် ပေသီးခေါက်တဲ့လူတွေ
သူတို့တွေ ကားစောင့်ကြတဲ့အခါမှာ ခရီးသည်ကိုတော့ ကြိုပါတယ်။
မြန်မာစကား မတတ် တ တတ်နဲ့ မေးသူလဲရှိ
ဒါပေမယ့် အချင်းချင်း နားလည်ထားကြတာက
တစ်ကားပြီးတစ်ကား တန်းစီ ကိုယ့်အလှည့်နဲ့ကိုယ်ထွက်
ဆိုတော့ ပြဿနာ သိပ်မရှိသလိုပါဘဲ။
ဘာကြောင့် ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် လက်နဲ့အရင်ထိုးသူက အမှားဖြစ်သွားပါတယ်။.
အဲတော့ ဖြစ်ရင် ပါးစပ်နဲ့ဘဲ အားရပါးရအော်ကြပါတယ်။
လမ်းပေါ်မှာ ဘယ်သူ့မှဂရုမစိုက် ဟွန်းအကျယ်ကြီးတီးပြီးလမ်းတောင်း
မြန်မာပြည်က ကားဆရာများထက် အပုံကြီးဆိုးပါတယ်။
ခရီးသည်လှမ်းတားတာမြင်ရင် ရှေ့မကြည့် နောက်မကြည့် လမ်းလည်ခေါင် က နေ ဘေးကိုဇွတ်ထိုးရပ်ပြီးလူတင်ပါတယ်။
အဲဒါကိုမြင်တော့ ရန်ကုန်မြို့က တက္ကဆီတွေက သူတို့လောက်မဆုိးသေးဘူးလို့
လမ်းပေါ်မှာဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့လှည့်နေတဲ့ ရဲတွေရှိနေချိန်တော့ စည်းကမ်းရှိကြပါတယ်။
အဲလိုအရမ်းမောင်းလို့လဲ အငှားယာဉ်နဲ့အိမ်စီးကား မကြာခဏ တိုက်ပါတယ်။
တန်းတူ မောင်းနေတာကအသက်အရွယ်၃၀-၅၀ ကြားမှာရှိတဲ့အမျုိးသမီးတွေပါ။
နောက်ကျယ်ခေါင်မြို့အ၀င်က နန်းတော်ပေါက်မှာ ဆင်ဖြူပေါက်မှာ
အဲဒီဆိုက်တွဲ ကို နင်းတဲ့သူ အများစုက အမျိုးသမီးတွေပါဘဲ။
ကိုယ့်နေရာနဲ့ကိုယ် ကိုယ့်အလှည့်နဲ့ကိုယ် တန်းစီပြီးစောင့်နေကြတာပါ။
ဒီဇိုင်းဖော်ပေးထားတဲ့ ပိတ်စလေးမှာ စီလွန်ချည်နဲ့အကွက်ဖော်ချင်ဖော်နေမယ်။
ကျယ်ခေါင်မှာ ဒီလို အငှားကားမောင်းတဲ့လုပ်ငန်း
မြစပဲရိုး says: စနစ်တကျ နဲ့ အလုပ် မရှားဘဲ လုပ်လို့ လဲ ရ၊ တန်ရာတန်ကြေး လဲ ရ ဆိုတော့ နေပျော်တဲ့ နေရာ လေးလို့ သတ်မှတ်ရမှာပါ။
ဆိတ်ကျောင်းသူက တောင် ဆိုင်ကယ်လေး နဲ့။ ဟန်ကျလိုက်တာ။
လမ်းတွေ လူတွေ ဈေးဆိုင်တွေ မြင်ရတာ သန့်သန့်ရပ်ရပ်။
ထိပ်ဆုံးက လမ်းဘေးက ခွေးရောင်းတာ ကြည့်ပြီး အဘဖော အသီးကွဲ သွားမလားဘဲ။
. ကြည့်ရတာ သနားစရာလေးတွေ။
အလှမွေး မဲ့ လူ ဘဲ ဝယ်မှာပါမဟုတ်လား။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဒီမှာ ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုတော့ရှိတယ်
ဆိုင်ရှေ့ မှာ ခုံမခင်းရ စက်ဘီးဆိုင်ကယ်မရပ်ရ
အဲလိုခွေးမျုိးရိုက်ရင် တရားစွဲ ခံရနိုင်တယ်
အောင် မိုးသူ says: ခွေးကြီးတွေ လှလိုက်တာ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အဲ့ခွေးတွေကို ကားတွေ ဆိုင်ကယ်တွေ ရပ်ပြီး ၀ယ်ကြသဗျ
မြင်တာတွေ့တာ လေးတွေ ပါးပါးလေးမျှတာပါ
တောင်ပေါ်သား says: ဆိုက်ကားလေး မစီးရက်စရာ အဲ့ခွေးတွေ သားတော်မောင်တွေ့ရင် ပူဆာမှာ အသေအချာ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: သူတို့ဆီကတော့ ဟိုနားဒီနား ငှားစီးကြပါတယ်
Mike says: .ဆိုင်းဘုတ်တွေမတော့ မြန်မာလိုပါရေးထားတာသတိထားမိတယ်
.အင်း…မြန်မာပြည်နဲ့အကူးလူးဆက်ဆံများတာကိုး…ကျေးကျေး ကိုပေါက်
ဒီမှာက မြန်မာစာတွေနဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ထောင်ထားပါတယ်
ဒီဘက်က ဖုန်း တွေ ဆိုင်ကယ်တွေ နဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ အဓိက ဖောက်သည်က မြန်မာတွေပါဘဲ
သူတို့က ကျနော်တို့ဘက်က ထွက်တဲ့ ဖရဲသီးတွေ ကျောက်တွေ ဆန်တွေပြန်ဝယ်ကြပါတယ်